भारतले लगायो टिकटक र पब्जीसहितसहितका यी ५९ चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध — sancharkendra.com
भारतले लगायो टिकटक र पब्जीसहितसहितका यी ५९ चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । ल’द्दा’ख भि’ड’न्त’मा २० भारतीय सैनिक मा’रि’ए’पछि चीनसँग रूष्ट बनेको भारतले टिकटक, पब्जीसहितका ५९ वटा चिनियाँ एप्सलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धित एप्सहरूमा चिनियाँ सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित वी मिट, वेब च्याट लगायत पनि छन् ।
चिनियाँ एप्सले देशको सम्प्रभुता र अखण्डतामा खतरा पुर्‍याएको भन्दै प्रयोगमा रोक लगाइएको भारतको आइटी मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतमा बाईकट चाईना अभियान जारी रहेको छ । भारतको उक्त निर्णयसँगै २२ करोड भारतीय टिकटक प्रयोगकर्ता र पब्जीका ५ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता घटेका छन् ।
यस्तै पूर्वी ल’द्दा’खमा चीनबाट हुनसक्ने कुनै पनि आ’क्रा’मक क’मलाई दु’रु’त्साहित गर्ने सैन्य योजनाअन्तर्गत भारतले संवदेनशील क्षेत्रमा एयर डि’फे’न्स ह’ति’यार प्रणालीसहित सैन्य संख्या बढाएको द हिन्दूस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
पूर्ण तयार हुनुपर्ने यो अवस्थामा हामी कुनै पनि घटनाका लागि तयार छौं भनेर समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेका सबै निकायबाट आवश्यक मापदण्ड अपनाइएको छ,’ नाम उल्लेख नगरिएका एक व्यक्तिले भनेका छन् ।
भारतको सैनिक आर्सनलमा स्थानीय आकाश, इजरायली स्पाई डेर, सेभियतकालिन पेचोरा र ओएस–एके प्रणालीजस्ता एयर डिफेन्स हतियार समावेश छन् । एयर डिफेन्स प्रणालीले फाइटर जेट, हेलिकप्टर र एरियल गाडीहरुको निशाना रोक्नसक्छ ।
चिनियाँ पक्षले सैनिक बढाएसँगै प्रतिक्रिया स्वरुप हामीले पनि आफ्नो सेना र हतियार बढाएका छौं । हामी सीमा क्षेत्रमा कडा रुपमा चनाखो भइरहेका छौं र पिएलएले चाल्ने कुनै पनि खतरनाक कदमको प्रतिक्रिया दिन पूर्ण तयार छौं,’ अर्का एक अधिकारीले भनेका छन् ।
वरिष्ठ भारतीय र चिनियाँ अधिकारीबीच २२ जुनमा सीमा क्षेत्रमा हिंसा निम्त्याउनेगरी कुनै कदम नचाल्ने सहमति भएको थियो । यद्यपी, चीन रोकिएको छैन, बरु गलवान क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाएको छ । १५ जुनमा भारतीय र चिनियाँ फौजबीच भि’ड’न्त भएको स्थाननजिकै तथा अन्य ठाउँमा सैनिक संख्या, सैन्य गाडी, अन्य उपकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण बढाइरहेको छ ।
ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वानटुवान वार्ता, के जुट्यो सहमति ?
ओली-प्रचण्डबीच ५ बुँदे सहमति भएको खबर बाहिरिएछि प्रचण्डको सचिवालय मुख खोल्यो
के हावाबाट पनि कोरोना फैलिन्छ ? यी देशका २३९ वैज्ञानिकले यस्तो दाबी गरेपछि विश्वभर त्रास
प्रचण्डको आँखा छलेर ओलीले देउवासँग के गरे गोप्य सम्झौता ? यसो भन्छन देउवा
नेकपाभित्र बिबाद बढिरहेका बेला माधव नेपाल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँको ढलमा कोरोना भेटिएको समाचार भाइरल बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, यस्तो रहेछ यर्थाथ
कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा थप १३ नेपालीको मृ’त्यु
सकियो ओली-प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता, के भयो सहमति ?
ओली-प्रचण्डबीच निर्णायक वार्ता सुरु, अरु को-को छन सहभागी ?